Ukuqaliswa kwe-LinkedIn yeWebhusayithi yeWebhusayithi | Martech Zone
Ukuqaliswa kwe-LinkedIn kwiWebhusayithi yeWebhusayithi
NgoLwesine, Julayi 27, 2017 NgoLwesithathu, Julayi 26, 2017 Douglas Karr
I-LinkedIn iqhekeza into entsha kwiiveki ezizayo, I-LinkedIn yeWebhusayithi yabantu. Idemografi yeWebhusayithi isebenzisa idatha evela kumalungu angama-500 + angama-LinkedIn ukunika ingqiqo kubatyeleli bewebhusayithi yenkampani yakho ngendlela ehlonipha ubumfihlo belungu.
Ifaka ujongano olufundeka ngokulula kwi-LinkedIn Campaign Manager, kwiWebhusayithi yeWebhusayithi ikuvumela ukuba ucofe abaphulaphuli bakho kwiwebhusayithi ngobukhulu obu-8 bobuchwephesha, kubandakanya:
Ubume beWebhusayithi buza kukuvumela ukuba ucofe ngoludwe lomhla ukuze uqonde ukuba ingaba iphulo lokuthengisa elisandula ukwandiswa liyinyusile na itrafikhi kumaqela akho abaphulaphuli. Ngaphezulu, ngoku uyabona ukuba utsalile amachibi amatsha amathemba kwiwebhusayithi yakho. Ngale mibono, unokuyila umxholo omtsha wentengiso eyilelwe ukubangcono kubaphulaphuli.
Umzekelo, masithi uqhuba urhwebo kwishishini le-IT kwaye ngokwesiko ujolise kubaphathi beetekhnoloji esekwe e-US. Ukujonga kwiDashboard yeWebhusayithi yakho, ufumanisa ukuba abaphathi abakhathalela ezempilo be-EMEA batyelela iphepha lemveliso ngaphezu kokuba ubucinga. Ukuxhotyiswa lolu lwazi, unokuhlengahlengisa isicwangciso-qhinga sakho sentengiso ukujolisa kwaba baphulaphuli basandula ukufunyanwa.
Idemografi yeWebhusayithi isinika ulwazi olusebenzayo malunga namacandelo ewebhusayithi zethu zamanye amazwe. Kusinceda ukuba siqonde ngokucacileyo ukuba sifikelela kubaphulaphuli abafanelekileyo ngeendlela zethu zokuthengisa kwiwebhu kunye nokubonelela ngokucacileyo malunga nabaphulaphuli bewebhu kulo lonke ixesha lokuphila kwabathengi. UBhanu Chawla, iNtloko yeSicwangciso seDijithali, kwiConerstone OnDemand
I-LinkedIn yeWebhusayithi yeWebhu yeyona nto iphambili ekuncedeni ukuba wenze izigqibo zokuthengisa ezinolwazi ngakumbi lokukhulisa ishishini lakho. Ngokukwazi ukuqokelela ukuqonda ngaphambi, ngexesha okanye emva kwemikhankaso, ungaphucula isicwangciso sakho kwaye wenze izigqibo zobukrelekrele.
tags: Uhlalutyoinkampaniubungakanani benkampanilizweqinisekisaishishiniumsebenzi womsebenziisikhundla somsebenziisihloko somsebenziLinkedInIndawo ezinxulumene nabantu kwiwebhusayithiindawoUhlalutyo lwewebhusayithiamanani abantu bewebhu
Ziziphi iiFonti ezigqibeleleyo ze-imeyile? Zithini iiFonti eziKhuselekileyo ze-imeyile?
Hi Douglas Karr, Enkosi kakhulu ngokubhala malunga ne-Linkedin Website Demographics. Iya kusinceda kakhulu kwintengiso yewebhu.